အဖွဲ့သား Chansung ရဲ့ ရိုက်ကွင်းကို သွားရောက်အားပေးခဲ့တဲ့ Taecyeon - MoviesFan Movie News
အဖွဲ့သား Chansung ရဲ့ ရိုက်ကွင်းကို သွားရောက်အားပေးခဲ့တဲ့ Taecyeon
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး K-Pop အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ 2PM အဖွဲ့ရဲ့ မန်ဘာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ အဆိုတော်မင်းသားချော Taecyeon က ရုပ်သံဒရာမာ ရိုက်ကူးနေတဲ့ သူရဲ့ အဖွဲ့သား Chansung ရဲ့ ရိုက်ကွင်းကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်ပြီး အားပေးသွားခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ Chansung က သူရဲ့ ရိုက်ကွင်းပေါ်ကို အဖွဲ့သား Taecyeon လာရောက်အားပေးဖြစ်ခဲ့ပုံအကြောင်းကို “ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း What’s Wrong With Secretary Kim? ရိုက်ကွင်းကို သူလာအားပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ အကို Taecyeon ရေ ကျေးဇူးပါဗျာ။ အကို့ကိုလည်း အရမ်းချစ်ပါတယ်” လို့ သူရဲ့ Instagram ပေါ်ကနေ ဇူလိုင်လ ၁၆ရက်နေ့မှာ ရေးသားဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။
#Taecyeon Visits #Chansung On The Set Of “What’s Wrong With Secretary Kim?”https://t.co/ZvmBNgIJgg pic.twitter.com/S450WgR9FL
— Soompi (@soompi) July 17, 2018
Chansung ဟာ လတ်တလောမှာ လူကြိုက်အရမ်းကိုများနေတဲ့ What’s Wrong With Secretary Kim? ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ အဓိကမင်းသား Park Soe Joon ဒုဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားရတဲ့ ကုမ္မဏီမှာ ဝန်ထမ်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင် ခပ်ချောချောကောင်လေး Go Gwi Nam အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Chansung ဟာ 2PM အဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း အဆိုတော်အဖြစ် ပွဲဦးမထွက်ခင်ကတည်းက သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Chansung ဟာ ၂၀၀၆ခုနှစ်က MBC ရုပ်သံလိုင်းကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသသွားခဲ့တဲ့ Unstoppable High Kick ဟာသဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပထမဦးဆုံး ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး Queen for Seven Days , 7th Grade Civil Servant တို့လို လူကြိုက်များအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာလည်း ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ကွမ်ဒိုလို့ ကိုယ်ခံပညာရပ်တွေဘက်မှာပါ ထူးချွန်သူဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်မင်းသား Chansung ဟာ ဆိုးလ်မြို့အတွင်းမှာ သူရဲ့ Weight Trainer နဲ့အတူ Fitness Centre တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Previous Post: Hollywood မှာ ပွဲဦးထွက်လာတော့မယ့် မင်းသားချော Lee Tae Ri
Next Post: အေဂျင်စီအသစ်နဲ့ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို အာရုံစိုက်လုပ်ကိုင်သွားမယ့် Baro